Blog ahụ bụ! | ThatsLuck.com
Nweta ego na ịkụ nzọ site na ịkụ nzọ ndị otu
Edepụtara: 14 / 01 / 2020
Nweta ego na ntanetị na ntanetị na otu ndị otu otu ndị si enweta ego na ntanetị n'ịntanetị site na ịkụ nzọ na mmeri ndị otu ahụ? Na-awagharị n'ịntanetị, m na-agakarị isiokwu ma ọ bụ posts na ịkụ nzọ na m na-echekwa na ihe nchọgharị m kachasị amasị m, na-ezube ịlaghachi ozugbo enwere ike ịme omimi ọdịnaya ha. Otu n'ime ndị a… Gụọ ihe niile
Usoro elu na ala maka ịkụ nzọ n'ịntanetị
Edepụtara: 15 / 02 / 2020
Thezọ ịkụ nzọ dị elu na ala Nke a na usoro ịkụ nzọ dị elu na-arịwanye elu ma ọ bụ na-ebelata osisi gị mgbe bankroll ruru ọkwa a kara aka. Ọmụmaatụ, gị bankroll bụ 100 nkeji na ị nzọ 10% nke ya ruo mgbe ngụkọta na-abawanye site 25%, to ... Gụọ ihe niile
Usoro ịkụ nzọ: esi kpuchie eriri
Edepụtara: 15 / 01 / 2020
Kedu ihe kpatara eji ekpuchi eriri? Usoro a iji kpuchie eserese na ịkụ nzọ gụnyere ịkụ nzọ maka mmeri nke otu otu na ikpuchi ihe osise ahụ, nke mere na ọ bụrụ na otu abụọ ahụ see, ị gaghị efunahụ ihe ọ bụla. N'ụzọ dị otú a ị na-echebe onwe gị pụọ na chi ọjọọ ma ọ bụ ọnọdụ ndị na-enweghị atụ, ... Gụọ ihe niile
Etu esi merie na ịntanetị na Blackjack
Edepụtara: 24 / 04 / 2020
Mmeri na ntaneti blackjack N'ebe ohuru a ana m agwa gi banyere otu esi emeri na ntaneti na blackjack, mana agaghi m eme ya mgbe o na-ekwu okwu banyere uzo mbu, i gha achota ndi di na ntaneti ebe nile ThatsLuck ọ bụghị 'ebe niile', ọ bụ ya mere m ji amalite ozugbo site n'ichetara gị ka ị denye aha na ọwa na ► YouTube, ebe m nwere olile anya ... Gụọ ihe niile
Usoro iji merie na roulette: ha na-arụ ọrụ n'ezie?
Edepụtara: 20 / 04 / 2020
Kedu usoro sistemu nke na-arụ ọrụ n'ezie? Enwere sistemu roulette na-arụ ọrụ n'ezie? Egwuregwu nke roulette dịkarịrị ka ọ dị ogologo oge karịa egwuregwu ọ bụla ọzọ na-agba chaa chaa, na n'ihi na e nwere ọtụtụ ụzọ dị iche iche nke ịkụ nzọ, ọtụtụ narị usoro dị iche iche ejirila ndị egwuregwu gbaa gburugburu ụwa kemgbe ọtụtụ narị afọ. ... Gụọ ihe niile
Otu esi emeghe saịtị ịkụ nzọ akpọchiri agbanwe dns
Edepụtara: 09 / 02 / 2020
Etu esi emeghe saịtị ịkụ nzọ akpọchiri agbanweghị dns nke kaadị ntanetị ma ọ bụ rawụta Ọ dị mkpa ịgbanwe dns nke kaadị ntanetị iji mepee saịtị ịkụ nzọ egbochi? Ruo ọtụtụ afọ ugbu a, ọrụ nke igbochi ndị ọrụ internetntanetị fromtali ịbanye na saịtị ndị a na-enyeghị ikike ịnakọta nzo site n'aka ndị ọrụ ... Gụọ ihe niile
Akụkọ banyere roulette: site na mmalite ya ruo taa
Edepụtara: 25 / 06 / 2020
History of roulette: the origins Akụkọ ihe mere eme (ọmụmụ) nke roulette malitere kemgbe ihe karịrị puku afọ abụọ gara aga, kpọmkwem n'oge ndị Rom oge ochie; n'ezie ọ dị ka ndị ọchịagha Rome jiri ọta mee roulette na-enweghị atụ, nke ha tụgharịrị na isi ube. Ndị nkịtị ahụ, ọ masịrị ha igwu egwu karịa ndị agha, mana o doro anya ... Gụọ ihe niile
Mmeri okpukpu abụọ na Roulette: Mgbe Kwụsị?
Edepụtara: 09 / 03 / 2020
Tinye akara iji merie roulette abụọ ị nwere ike imeri roulette abụọ? Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka nke a, anyị ga-akọwapụta ụfọdụ isi ozugbo, n'ihi na azịza ya dabere n'ọtụtụ ebumnuche gị yana oge. Stopwin, stoploss, bu okwu m na-aguta na forums ịkụ nzọ ihe karịrị afọ 20, ... Gụọ ihe niile
Otu esi emeri na ịkụ nzọ n'ịntanetị na ịkụ nzọ dị ndụ
Edepụtara: 14 / 02 / 2020
Na-emeri na ịkụ nzọ n'ịntanetị na ịkụ nzọ ndụ Na-eche ka bastard coronavirus a si n'ikpeazụ pụọ na igbe ahụ, taa ThatsLuck Ana m ekwu banyere otu esi emeri na ịkụ nzọ n'ịntanetị na ịkụ nzọ dị ndụ. Bettingzọ ịkụ nzọ a, dị ka aha ya na-egosi, gụnyere ịkụ nzọ dị ndụ mgbe ị na-ele egwuregwu. ... Gụọ ihe niile
Atụmatụ ịkụ nzọ na nsonaazụ ikpeazụ / nke ikpeazụ
Edepụtara: 17 / 03 / 2020
Kedu ihe nzọpụta ele mmadụ anya n'ihu na nke ikpeazụ? Gba chaa chaa na nke ikpeazụ na egwuregwu ikpeazụ nke egwuregwu bọọlụ nwere itinye ihe nzọ na nsonaazụ na njedebe nke ọkara mbụ na ngwụcha egwuregwu. Ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na ị nzọ na home team ga-aga n'ihu ma halves ... Gụọ ihe niile